Zụta Bitcoin na Revolut | Paxful
Zụta Bitcoin (BTC) jiri Revolut
Etu esi Azụta Bitcoin na Revolut
Ihe karịrị nde mmadụ 2 na eji Revolut eme ihe ma na-enyekwa ọtụtụ ọrụ akụ na ụba, gụnyere ịnyefe ego mba ụwa na ọkwụkwụụgwọ ndị isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ. Ugbu a, ịnwere ike iji Revolut zụta Bitcoin na Paxful na enweghị ụgwọ ọzọ. Nke a bụ otu:
Ihe mbụ ị kwesịrị eme bụ ịbanye na akaụntụ Paxful gị ma ọ bụ mepụta otu site na ịpị Mepụta akaụntụ. Mgbe ịmechara usoro nyocha akaụntụ ahụ, pịa Zụta Bitcoin ịtọ Revolut dị ka usoro ọkwụkwụụgwọ ị họọrọ iji lelee ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ndị dị mkpa. Ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma sitere n'aka ndị na-ere ahịa a ma ama na otu ụzọ iji chọta ha bụ ịlele profaịlụ òreè na nzaghachi kachasị mma. Naanị pịa aha ndị na ere ahia ka ị hụ akụkọ ahịa ha na nyocha ha na ndị mmekọ ha.
Ozugbo ịchọtara ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ị chọrọ n’aka ndị na ere ya kwere, pịa Zụta iji lee anya n’ihe azụmaahịa ha chọrọ. Jiri nlezianya gụọ ọnọdụ azụmaahịa ma soro ha na leta ahụ Pịa bọtịnụ "Nabata Iwu mgbaso na Zụta Bitcoin Ugbu a!" ma ọ bụrụ na iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa na amasị gị. Igbe nkata ndụ ga apụta ebe ịnwere ike ịkọrọ onye na ere ma jụọ ma ha nwere ihe ndị ọzọ achọrọ.
Rịba ama na Paxful na eji usoro ego edebere ruo na azụchaa ahịa iji kpochie BTC onye na ere ere ozugbo ebidola ahịa - yabụ na ego gị nwere nchekwa.
Ozugbo i zipụrụ ọkwụkwụụgwọ na akaụntụ Revolut nke onye na ere ahịa, pịa Tinye dika Akwuola Ụgwọ ka onye na ere wee nwee ike ịhapụ BTC site na ego edebere ruo na azụchaa ahịa. Ọ bụ ya! Ị zụtala Bitcoin nke ọma site na iji akaụntụ Revolut gị.